Soomaalida Oo Joojiyay Shaqadoodii Xawilaadaha Lacagaha, Haya’ddaha Caalamiga Ah Oo Walaac Ka Muujiyay Talaabadaa Iyo Bulshada Soomaalida Oo Dareen Cadho Ah kaga Jawaabtay – Araweelo News Network (Archive)
Washington(ANN) Shirkaddaha Xawaaladaha Soomaalida ee ka shaqeeya dalka Mareykanka ayaa maanta dhammaantood joojiyay adeegga xawaaladaha lacagta. Kadib markii baananka Mareykanku ay diideen inay lacagtaa xawilaan. Iyagoo ku doodaya Baananku inay
fulinayaan qaanuunka dalka Maraykanka, isla markaana ay u hogaansamayaan qaanuunka maaliyadda Mareykanka. Maadaama sida ay ku doodayaan Lacagaha laga xawilo qaarkood la isdaba mariyo ama loo diro hey’addo, ama xataa shakhsiyaad ku lug leh arga-gixisnimo. Sidaa awgeed ay yihiin mamnuuc in lacago noocaas ah inay xawilaan baananka Maraykanku.
Kumanaan Soomaalida ku dhaqan dalka Maraykanka gaar ahaan Minnesota ayaa muujiyay dareenkooda ay ku diidan yihiin go’aankaa, waxay boqolaal ka mid ah dadkaa ooo mudaharaadyo ay ku diidan yihiin talaabadaa sameeyay ku dhawaaqayeen ereyo ay ku canbaaraynayaan go’aankaa.
Warbaahinta aduunka ayaa qaarkood talaabadaa ku tilmaameen mid khaldan oo keeni karta macaluul hor leh oo ka dilaacda geeska Afrka, gaar ahaan bulshada Soomaalida iyo guud ahaanba Geeska Afrika, kuwaas oo ehelkooda iyo saaxiibbadooda ka shaqeysta Mareykanku ay lacagta u soo mariyaan sharikadaha Xawaaladaha sanad kasta malaayiin dollar.
Ilaa hada dawladda Maraykanku ma sheegin qorshe cad oo haddii nidaamkaa sidaa lagu joojiyo lagu bedelayo qorshaha lacagta bulshada Soomaalidu dadkooda lacagaha ugu soo diri jireen. Talaabadan waxa si weyn walaac uga muujiyay haya’ddaha gargaarka ee ka hawlaga Somalia iyo kuwa qaramada midoobay oo sheegaya inay talaabadni tahay mid horseedi karta macaluul iyo faqri soo waajaha bulashada Soomaalida ee dagaalada iyo macaluushu aafeeyeen oo taageero dhaqaalle ka heli jiray walaalohooda iyo eheladooda qurbaha ku maqan, gaar kuwa ku dhaqan dalka Maraykana ee laga joojiyay lacagaha laysugu diro xawaaladaha.